NCA Yozeya Chirongwa cheKunyorwa kweBumbiro neMugovera
Sangano reNational Constitutional Assembly riri kuita musangano mukuru neMugovera wekuzeya hurongwa hwaro hwekunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika. Musangano uyu unoitwa apo hurumende iri kuitawo chirongwa chekunyorwa kwebumbiro idzva.
NCA inoti chirongwa chehurumende hachisi kuitwa nenzira kwayo, uye icharamba ichiburitsa kuipa kwakaita chirongwa chehurumende.
NCA inoda kuti vanhu vatungamire mukunyorwa kwebumbiro idzva, kwete kuti izvi zviitwe nehurumende. Sangano iri rinoti Zanu PF neMDC dzichaisa zvido zvadzo mumbumbiro riri kunyorwa, kwete zvido zveveruzhinji.
Muna 2000 sangano iri rakakurudzira veruzhinji kuti varambe kutambira draft constitution pareferendamu yakaitwa. NCA inoti chirongwa chayo chekushoropodza chirongwa cheCOPAC, che Take Charge Campaign, chicharamba chichiburitsa zvakaipira chirongwa chehurumende.
Mutauriri weNCA, VaMadock Chivasa, vanoti musangano wavo uchapindwa nehutungamiri hwesangano ravo mumatunhu ose ari munyika..
Mune imwewo nyaya ine chekuita nekunyorwa kwebumbiro idzva riri kutungamirirwa nehurumende, vagari vekuBinga vanoti havasi kufara nechirongwa ichi sezvo vari kuturikira zvinhu zvinofanirwa kunge zvichiiswa mubumbiro idzva, vari kushandisa rurimi rweNdebele. Vagari ava vanoti vazhinji vavo havanzwisisi Ndebele. Studio7 haina kukwanisa kunzwa kunhengo dzeCOPC kuti seyi izvi zviri kuitwa.
Amai Olivia Gumbo ndivo vanoona nezvezvirongwa zveZimrights. Amai Gumbo, avo vari kufamba vachiongorora zviri kuitika muchirongwa ichi, vanoti vanhu vanofanirwa kutaura nemitauro yavanokwanisa.